DEG DEG: Willian oo looga yeeray xulka qaranka Brazil si uu u bedelo Neymar Junior – Gool FM
DEG DEG: Willian oo looga yeeray xulka qaranka Brazil si uu u bedelo Neymar Junior
(Brazil) 07 Juunyo 2019. Xulka qaranka Brazil ayaa u yeeray ciyaaryahan Willian si uu u bedelo Neymar Junior oo dhaawacmay.
Xiddiga kooxda Chelsea ee Willian ayaa wicitaan ka helay xulkiisa Brazil ee ka qeyb galaya Copa America si uu u bedelo booska uu ka baxay Neymar Jr, kaasoo dhaawac Canqowga ahi uu soo gaaray kulankii saaxiibtinnimo ee ay wajaheen Qatar.
Weeraryahanka xulka Brazil ee Neymar Junior ayaa seegi doona tartanka xiisaha badan ee Copa America kaddib dhaawacaas ka soo gaaray carjawda canqawga.
Waxa uu Neymar garoonka ka baxay isagoo ilmeynaya daqiiqadii 21-aad kulankii saaxiibtinnimo oo ay la dheeleen Qatar, taasoo ka dhigtay in loo baahdo ciyaaryahan bedela booskiisa maadaama uusan taam u noqon karin tartankan uu dalkiisu marti gelinayo ee Copa America.
Inkastoo xulka Brazil ay kulankaas saaxiibtinnimo guul 2-0 ka gaareen dhiggooda Qatar haddana waxa ay lumiyeen ciyaaryahankooda sare ee Neymar Jr, kulankaas waxaa labada gool u kala dhaliyey Brazil labada xiddig ee Premier League ka ciyaara ee Gabriel Jesus iyo Richarlison.
Haddaba Willian ayaa fursaddiisa helay xulka qaranka Brazil ayaana u caway si uu u buuxiyo booska uu ka maqan yahay Neymar oo dhaawacan.
RASMI: Kooxda Manchester United oo ku dhawaaqday saxiixeedii ugu horreeyey ee xagaaga